Umhla My Pet » Indlela yokuba Umhla Amazing First
ukubuyekezwa: Oct. 14 2020 | 5 min ukufunda
Umhla wokuqala inokuba lixesha langoku omabini amaqela. Kananjalo uyakwazi ukulindela, nokuba Ukuba ndithethe kumntu intanethi okanye efowunini yaye uvakalelwa kukuba ubazi kakuhle, Abantu abaninzi badla novalo phambi komhla wokuqala. Ngoko apha ezinye iingcebiso ukuba umhla omkhulu kuqala.
Gcina umhla wokuqala mfutshane - Kuba umhla wokuqala inokuba langoku encinane ibe yeyona ndawo ukwenza mfutshane kwaye limnandi. Le ndlela unokuba nexesha elimnandi kunye entanjeni eliphakamileyo. Akukhathaliseki kangakanani ukuze uqhagamshele xa beringa online, Inokubanomahluko ngokupheleleyo xa udibana buqu, kwaye soze wazi ukuba uza yokuqhubekeka ude bachithe ixesha kunye nabo ubomi benene. Ngoko ke sikuthathela ingqalelo oku engqondweni ukugcina umhla wokuqala mfutshane.
Ngokwenza ngolu hlobo ukuba anithanga bazive bekhululekile nabo ke unako aphume kuselithuba. Kodwa ke, ukuba NGABA kanye kwabo, Kubalulekile kwakhona ukuba uwugcine umhla elifutshane. Impazamo enkulu abantu xa uthandana kukuba ukuchitha ixesha elininzi kunye kakhulu ngokukhawuleza. Nangona kuyinto eqhelekileyo ukuba ufuna ukuchitha ixesha kunye xa ungathanda omnye komnye, iza kuvumela uqhagamshelo ukuvelisa ngokwendalo ukuba uyaziphuhlisa ngokucothayo kakhulu kwixesha. Le ndlela ndikwazi omnye komnye kancinci. Kananjalo uya uyazixabisa omnye kakhulu ukuba asinguwe ziyafumaneka kakhulu kunene ekuqaleni. abantu okunempilo ukugcina ubomi babo eyahlukileyo ngokunjalo ukuchitha ixesha ukuthandana.
Sikuthathela ingqalelo oku, masazi ukuphepha ukwenza Ubhukisho isidlo ngomhla wokuqala. Ukuba kuvele elubala ukuba abembi (kwaye nokuba) kuya kufuneka ukuba ahlale iiyure ubuncinane, ngokuqhelekileyo elide, nabo, okanye abe krwada kakhulu ukuba aphume kuselithuba.
Yenza into izandla ngobumnandi - Nangona isiselo kwi ibha ukhetho eqhelekileyo ukuba umhla wokuqala akukho yonke entsha. Kwakhona kunokuba nzima kancinane ukuze akhululeke xa behleli malungana omnye komnye ngendlela esesikweni. Kwinto efanayo ebamba ikofu inokuba ukhetho elungileyo ngomhla wokuqala kuba Kuyakhawuleza kwaye kulula, Kodwa ukuba ngokwenene ufuna ukwenza injezu kutheni ukuya into engaqhelekanga kunye izandla endaweni. Khetha into apho benza umsebenzi kunye, ezandleni engakumbi ngcono njengoko oku kunokusinceda ukuze akhululeke. imizekelo emihle upheka kunye, sibethwa ngumoya kwindawo entle, zomdongwe okanye into ethile apho kufuneka sisebenze ngokubambisana. Oku kuya kuthatha uxinizelelo wabo bobabini njengoko uya kwenza into kunye. Ivumela ubuntu bakho ukuba eze ngaphezulu ngokwemvelo, kunokuba umhla ajike abe ngumntu 'ndlebe' apha etafileni, leyo kaninzi kwenzeka xa udibana ebharini.
Khuseleka - Oku kufuneka kube yinxalenye mantra indawo dater ngayo, ingakumbi kwabasetyhini enye. Ayisafuni nakucaciswa yona into yokuba kufuneka sihlale ukhuseleko engqondweni kwaye ukhethe wokungenela kwindawo kawonke okokuqala udibana nomntu. Musa awuvumi ukuya isidlo endlwini yabo. Enoba kakuhle ukuba wazi umntu ukuthetha online, ukuba akanakuze mxelele ngenene indlela umntu unyanisileyo ude wachitha ixesha kunye nabo. ngokunjalo, ngokwenene lakuva ncebiso yakho (emathunjini ezizezemvelo). Ilapho ukukhusela wena ngokuqhelekileyo iba wakho uya kukuxelela xa into okanye umntu uvakalelwa kunene. Phulaphulani kwaye usoloko wabeka ukhuseleko yokuqala.
Qinisekisa ukuba nesimo sengqondo phambi kokuba uye enkundleni ngomhla - abantu abaninzi nje ukuya kumhla ngqo emsebenzini, kwaye nangona kwakukho nto iphosakeleyo oku kubalulekile ukuba uqinisekise ukuba zingabonakaliyo nesimo sengqondo zomhla yakho. Ukuba intloko yakho nangoku kuluhlu lwakho 'ukwenza' uya kuba mnandi kakhulu ngomhla! Ngokufanayo, ukuba nithe nabuya phezulu wagxininisa, ndida- ukuncwina akuyi babe nesimilo esihle kuqala. Kuthatha imizuzu embalwa nelokuphumla ukulungiselela wena kuqala ngaphambi kokuba intloko ngomhla wakho. Thatha ezinye Phefumla wenze umthambo lokuphumla xa kufanelekile. Lungisa ingqondo yakho - ngqondweni indlela ongathanda ukuba umhla ukuya. Nokuba uthe wahamba ngqo emsebenzini onokuyenza lo gama kwi ibhasi.
Amanye amabhinqa bachitha iiyure balungisa ngokwasemzimbeni, kodwa musa ukuchitha naliphi ixesha ilungiselela ngengqondo. Nangona intle ukuqinisekisa ukuba uzive bazithembe inkangeleko yakho, ukuchitha iiyure ngayo ku no dibanisa uxinzelelo. Kunokuba achithe nje ixesha elide ngokwaneleyo ukuze wena khangela smart kwaye uzive okulungileyo, koko bachithe imizuzu embalwa naye ulungiselela ingqondo yakho. Ngokunqwenelekayo uya kuhamba ngemihla yakho uziva yimincili ndizole noko. Kunokuba emnandi ukudlala umculo esikhuthazayo xa ufumana ukulungele kwaye nalo umdaniso ngeenxa igumbi. Akuba wathi yakhe musa ukusirhoxisa umhla ukuba azikho kwimeko egqibeleleyo ingqondo okanye ukuba novalo. Ngokufuthi wakuba ukuphuma endlwini ngomhla uya uphumle kwaye wonwabe.
Yiba nguwe - Maxa wambi xa abantu ngemihla zokuqala bengengabo bona. Bathi ukutshintsha ubuntu babo ukuzama ukuchukumisa omnye umntu. Mhlawumbi luvo labo ukuba ngcono kuzo kwaye baphetha uziphatha Okothusayo, izama nzima kakhulu, clamming phezulu okanye masinxibe ngaphambili ukuyifihla luvo. Oku akuyomfuneko ngokupheleleyo kwaye banokubenzakalisa amathuba akho nokudala unxulumano nokuba Ndonwaba umhla wakho. Ndiyazi ukuba unako ziba nomntu intlanganiso wracking okokuqala makhe mna ndinixelela imfihlelo kancinane. BONKE novalo ngomhla wokuqala! Ke umhla bakho baya uziva kanye njengoko noloyiko njengoko. Yinto yemvelo ngoko ke wena a kenzanga. Kunokuba bakhathazeke okukruqulayo ingqalelo ukufunda into entsha ngalo mntu phambi kwakho, ucinga kubenza bazive bekhululekile. Le ndlela uyakuzifumana umxakatho kakhulu ngokwendalo. Kunjalo ukuba bakhetha ukwenza izandla umsebenzi njengoko kuchaziwe ngentla oku kunokukunceda ukuba uphumle. Xa bebona khaphu- ukuba ubuntu bakho bokwenene baya zikhazimla. Vele ubenguwe. Ugqibelele ukuba indlela.
Yonwaba - Xa inkcubeko yasentshona ngathi sonke thathe ukuthandana nzulu kakhulu. Belibala asakhangela ukuba ingaba lo mntu undofa ofanelekileyo kweli nqanaba. A UMHLA LOKUQALA Asiyindawo UKUFUMANA UKUBA BE iboyfriend / NEZINTO Girlfriend FA. Uzayo emva. Amathuba okuba bengengabo – inkoliso imihla kuqala musa kukhokelela kubudlelwane Ukuba uyazi ukuba le nto inokukunceda ukulawula nokulindeleyo. imihla kuqala nje ukuba kuni apho yokuhlangana likwasebenzisana nabantu abatsha, kwaye baza kuba unandiphe uze wonwabe. Xa ndlela 'ukuba fun' kule meko akuthethi ukunxila ngokwenene okanye ngesondo, zombini kufuneka kuphetshwe ngomhla wokuqala (Ukuba ufuna umhla wesibini ukuba). Kuba kubaxhasi enye endisebenza nabo ndisoloko AIS phandle phaya ndithandane ehlabathini lokwenene. Ndiyawuncoma ufunda inqaku yam ukuthandana njengoko unyango ukufunda okungakumbi.
Yiba ukuthandana fun!